काे-राेनाकाे यस्ताे लक्षण देखिए बच्चाहरुलाई तुरुन्त अस्पताल पुर्याउनुपर्छ, डाक्टरले दिए लक्षणका संकेत ! छिटो पढ्नुहाेस् र सेयर गर्नुहाेस्
June 13, 2021 khabarmazzakoLeaveaComment on काे-राेनाकाे यस्ताे लक्षण देखिए बच्चाहरुलाई तुरुन्त अस्पताल पुर्याउनुपर्छ, डाक्टरले दिए लक्षणका संकेत ! छिटो पढ्नुहाेस् र सेयर गर्नुहाेस्
काे-राेनाकाे यस्ताे लक्षण देखिए तुरुन्त बच्चाहरुलाई अस्पताल पुर्याउनुपर्छ, डाक्टरले दिए लक्षणका संकेत ! बर्दियामा को- रोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिए सबैभन्दा बढी बालबालिका सङ्क्रमित हुने जोखिम रहेको चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन् । चिकित्सकहरु यस्तो अवस्था आए सरकारी तयारी खासै नभएको गुनासो पोख्छन् ।
बर्दिया जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुभाष पाण्डेले दुई वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि अहिलेसम्म कुनै खोप नआएकाले उनीहरु बढी जोखिममा रहेको बताउनुभयो । जिल्लामा हाल एक वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका बालबालिका को-रोना सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालयले बर्दियाको प्रमुख गोर्कण गिरीले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाको प्रमुख गिरीले दिएको जानकारी अनुसार शनिबारसम्म २७ जना बालक र २२ जना बालिका सङ्क्रमित भएका छन् ।
को-रोना सङ्क्रमित बालबालिका होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । दोस्रो चरणको को-रोना फैलिएपछि बर्दियामा १८२ जना बालबालिका निको भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये बालक ९६ र बालिका ८३ रहेका छन् । ठाकुरबाबा नगरपालिकामा—११ बालबालिका होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । गु-लरिया र बाँसगढी नगरपालिकामा आठ र आठ, बारबर्दियामा छ, राजापुरमा पाँच बालबालिका को-रोना सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।बर्दियामा बाल चिकित्सकको अभाव छ ।
बालबालिकालाई सङ्क्रमण भए छुट्टै को-भिड अस्पताल पनि छैन । जिल्लामा एउटा पनि बालबालिकाका लागि विशेष अस्पताल नहुँदा स्थानीयवासी सास्ती भोग्न बाध्य छन् । को-रोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी असर गर्ने भन्दै बालबालिका हेर्न चिकित्सक विज्ञहरूले अस्पतालमा निश्चित शय्या छुट्याएर आवश्यक तयारी गर्न सुझाव दिएका छन् । को-रोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा ‘हटस्पट’ बनेको लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा बालबालिकालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन कुनै तयारी नहुदा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
खाद्य बैंकको राहतबाट विपन्नलाई वरदान साबित को-रोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा थपिँदै जाँदा बर्दियाको गुलरियामा सञ्चालित खाद्य बैंकको राहातबाट विपन्नलाई वरदान साबित भइरहेको छ । गुलरिया नगरपालिकासँग सहकार्यमा हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल, लायन्स क्लब अफ बर्दिया र एन्टा अमेरिकालगायतका सामाजिक संस्थाले को-रोना महामारीमा रोगले मात्र होइन भोकले पनि कोही नमरुन् भन्ने पवित्र उद्देश्यले खाद्य बैंक शुरु गरेका हुन ।
हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल, नेपालगन्जका संवाहक राजेन्द्रकुमार यादवले टोलटोलमै पुगेर अतिविपन्न तथा छाक टार्न मुस्किल हुने परिवारको नामावली सङ्कलन गरेर सहयोग गरिरहेको प्रष्ट पारे । खाद्यान्न वितरणका लागि गुलरिया नगरपालिकाले गाडी उपलब्ध गराएको छ । रोगजारी गुमेको अवस्थामा दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरुलाई खाद्य बैंकको सहयोगले राहत दिएको लाभान्वित भएकाहरु बताउँछन् । गु-लरिया नगरपालिका—७ का कालु रैदासले भन्नुभयो, ‘‘को-रोनाले खाद्यान्नको समस्या भइरहेको थियो ।
बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ भएको बेला खाद्यान्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।” काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।
अभिनेत्री निशा घिमिरेको उपचार नर्भिकले निःशुल्क गर्ने सबैले सियार गर्नुस
August 31, 2021 khabarmazzako
आमाको मुख हेर्ने दिन,तयार हुनुहुन्छ ?